Dhageyso Sheekh Abuu Cadnaan Oo Ka Hadlay Dagaalka Gaalkacyo. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Sheekh Abuu Cadnaan Oo Ka Hadlay Dagaalka Gaalkacyo.
Waaliga WI Mudug Sh Cabdul Qaadir Abu Cadnaan oo wareysi ay la yeelatay Idaacadda Andalus ayaa waxa uu faah faahiyay dhibaatooyinka laga soo sheegayo magaalada Galkacyo iyo saameynta ay ku yeesheen dadka rayidka ah.
Sheekha ayaa sheegay in labada maamulka ay qorsheysteen inay ku dul dagaalamaan dadka shacabka ah waliba si baâ€™an u gumaadaan taasoo ka dhalatay buu yiri in laga kala guuro magaalada dadkuna daadsanaadaan dhulka bannaanka ah.
Waxa uu sheegay waaliga in ka wilaayo ahaan ay gurmad u sameeyeen qoysas fara badan oo soo maciin biday dhulka mujaahidiinta kuwaasoo ay dib u dajin u sameeyeen kuna garabsiiyeen sidii ay kaga soo kabsan lahaayeen noloshii dagaalka Galkacyo.
Sh cabdul Qaadir ayaa wareysigiisa waxa uu kaga hadlay arrimo kala duwan oo dhinacyo kala duwan taabanaya.
Dhageyso Wareysiga Waaliga.